Famantarana ny fifamoivoizana an-tserasera amin'ny tolo-kevitry ny seminera
Tsy mety ny milaza fa ny automation dia nanampy be dia be ny orinasa mba hiasa tsara sy azo antoka amin'ny Internet. Fomba iray azo antoka sy mora izy ireo mba hisorohana ny fisian'ny hosoka amin'ny ankapobeny ary hanampy anao hampitombo ny tombony azonao. Ny trangam-panaovana dia natao amin'ny fomba maro ary amin'ny alalan'ny rohy ihany koa - cassandra dashboard. Ny fifamoivoizana Bot dia navoaka tamin'ny rohy avy amin'ny fiarahamonina, izay tsy misy dikany ary tsy afaka manome toky anao ny vokatra tadiavinao.
Alexander Peresunko, Semalt Mpitantana Success Successor, dia nilaza fa ankehitriny dia lasa nilaina ho an'ny mpandraharaha rehetra ny mamantatra, mandinika, manombatombana, ary manala ny fifamoivoizana amin'ny bot. Raha manana programa afrikana sy dokam-barotra izay maniry ny fifamoivoizana amin'ny olona ianao, dia lasa zava-dehibe aminao ny manala ny fifamoivoizana sy ny bots amin'ny vidin-tserasera, izay manome ny mpanjifa amin'ny fifamoivoizana ara-dalàna sy ara-drariny fotsiny. Raha tsy manao an'izany ianao, dia tsy ho ela dia handroaka ny volanao amin'ny tranokalanao ireo bots, tsy mamerina na inona na inona afa-tsy ny nenina. Ny asa samihafa dia mety ho tanteraka raha tsy avy amin'ny fandaharam-pamokarana na botsika ny mpitsidika anao. Ataovy azy ireo marina sy ara-dalàna satria io no hany fomba ahazoanao matoky ny mpanjifanao. Avelao aho hilaza aminareo fa ny boka sandoka sy ny fifamoivoizana tsy misy kalitaona dia tsy afaka mamoaka vola na fitarihana amin'ny orinasanao. Izany dia satria ny taham-pifandraisana miaraka amin'izy ireo dia avo dia avo ary tsy mahazo tombony amin'ny tompona tranonkala.
Raha fehezina, dia an-dalam-pahavoazana ho antsika rehetra ny hahazo ny fifamoivoizana marina ary hisorohana ny fahatongavan'ny bots. Affiliation marketing dia efa nandritra ny taona maro ary nihalehibe tamin'ny fotoana. Misy ny ahiahy mitohy momba ny hetsika mahatsiravina sy ny tetika tsy misy dikany ampiasain'ny mpiara-miasa, mandany vola avy amin'ireo dokam-barotra. Raha toa ianao ka matoky ny fandraisanao ny orinasa amin'ny sehatra manaraka, dia tsy tokony haka vola avy amin'ireo mpizarazara anao miorina amin'ny botsaka sy ny fifamoivoizana. Ny mpampiasa rehetra dia tokony hanandrana hamolavola ny tena fivarotana ary tsy hiantehitra amin'ny fitsidihana tsy mendrika. Ny fandefasana ny fifamoivoizana amin'ny pejy Internet na ny rohy eo amin'ny rindrambaiko dia tsy hahazo anao mivarotra. Azonao atao kosa ny manimba ny fijerin'ny ankamaroan'ny tranonkala. Raha toa ny Google Analytics maneho ny botsa sy ny fifamoivoizana ho marina, dia izao no fotoana hanakanana ireo adiresy IP ireo haingana araka izay tratra. Ny mpividy misahana ny hosoka dia mividy fifamoivoizana avy amin'ny tranonkala samihafa amin'ny alalan'ny fandoavam-bola dolara vitsy monja ary manaparitaka ireo tranonkala sy rohy mifandray amin'ny fiarahamonina miaraka amin'ny fahatsapana maro sy ny fitsidihana izay tsy azo ovaina velively amin'ny fivarotana.
Misy botsa sy fitaovana samihafa azo atao mba hiterahana fifamoivoizana sandoka. Ity fifamoivoizana ity ary ireo fitsidihana ireo dia tsy afaka mamorona fomba fijery marina amin'ny aterineto. Izy ireo dia entina amin'ny alalan'ny programa bot izay manohy mamelombelona ny toerana isa-minitra. Noho izany, zava-dehibe ny mamantatra ireo botsika ary manaisotra azy ireo. Ny mpividy rehetra amin'izao fotoana izao dia mampiasa ireo bots ireo mba hahazoana marobe amin'ny fifamoivoizana ao amin'ny tranonkalany, saingy tsy afaka hivarotra na hanimba ny lazany amin'ny aterineto izy ireo noho ireo hetsika mahatsiravina ireo. Tokony hifantoka amin'ny manam-pahaizana momba ny IT momba ity olana ity ianao sy ny fomba hanafoanana izany.